Sidee loo noqdaa xirfadle CCNP oo leh shahaadada shahaadada leh - Iskuulka ITS Tech
CCNP Professional Certified Professional
Waa maxay shahaadada CCNP Wireless?
Tallaabada 1: Ka eeg fursadda aad u qalantay inaad qaadato shahaadada
Tallaabada 2: Helitaanka shahaadada
Tallaabada 3: Dib u cusbooneysiinta shahaadada
Cisco waxay bixisaa caddayn badan oo xirfadle ah sida CCNA iyo CCNP. Tan iyo markii ay CCNP waa heer ka sareeya kan CCNA, waa wax aad u adag oo codsanaya macluumaad dheeraad ah oo faahfaahsan iyo jimicsi. Haddii ay jirto dhacdo ah shahaadada wireless, cabirada shabakadda wireless-ka iyo farsamada ayaa loo adeegsadaa in lagu soo saaro xarun xirfadleyaal si ay ula kulanto baahida shabakadaha wireless. Iyada oo waxbarashadu kor u kacday shahaadada, xirfadlayaashu waxay si wax ku ool ah u samayn karaan tarjumaadda baahida ganacsi ee ku-meel-gaar ah. Hadda na siiya fursad aad ku aragto shahaadada CCNP Wireless si faahfaahsan.
Cisco Certified Network Professional Certification Wireless waxay ku tiirsan tahay naqshadeynta shabakada wirelesska iyadoo la adeegsanayo qalabka Cisco. Waxaa lagu yaqaan 2009 iyadoo la tixgelinayo baahida ganacsiga ee sii kordheysa. Shahaadooyinka waxay daboolayaan gudbinta, qorsheynta, xaqiijinta iyo baaritaanka shabakadaha wireless ee Cisco.
CCNP Wireless faafin maadooyinka sida hogaaminta daraasaadka goobta, helitaanka shuruudaha macmiilka, fulinta shabakadaha wireless, xaqiijinta aasaaska laydhka LAN iyo waxyaabo kale oo badan oo aan caadi ahayn. Xirfadlayaasha haysta shahaadadan oo dhan ayaa loo arkaa inay yihiin kuwo gacanta ku haya gacmaha-lug ku lug leh qalabyada wireless ee Cisco. Tani waa shahaadada ugu wanaagsan ee loogu talagalay xirfadlayaasha raadinaya shaqooyin ka fiican iyo mushahar sare. Marka la eego hoosta ayaa ah habka loo qaato shahaadada.
Eeg Sidoo kale:Shahaadada CCNA - Hage Dhammaan
Xirfadlayaasha shabakadaha ee shabakadaha sida qorshaha shabakada netka, maamulayaasha shabakada iyo khabiirada shabakada ayaa qaadan kara shahaadada si ay u kobciyaan fahamkooda iyo waxqabadkooda. Shakhsiyaadka raadinaya mawqifaadyadani waxay dooran karaan tan si loogu daboolo si caqli-gal ah u-qalanta furfurista shaqo ee la xidhiidha. Waxaa la qiimeeyaa in shaqaaleyntu ay kordhin doonto 20% inta u dhaxaysa sanadaha 2008 iyo 2018. Heerka horumarinta ganacsiga waxaa lagu tiirsan yahay in uu ku wareegsan yahay 30 taas oo faa'iido u leh xirfadlayaasha ku jira meeshan. Mustaqbalku wuxuu arkayaa tin furan oo shaqeynaya jihada jihadooda marka ay helaan shahaadada.
Qofka u baahan inuu helo shahaado waa inuu haystaa shahaadada CCNA Wireless ama CCIE. Tani waxay ka dhigan tahay in la helo shahaadada wireless ee CCNP, isaga ama iyadu waxay u baahan tahay inay marka hore qaadato Cisco Certified Network Associate Network ama Cisco Certified Internetworking Certification Profit marin kasta.
Waxaa jira afar imtixaan oo loogu talagalay shahaadada wireless. Kuwani waa 642-731 CUWSS, 642-741 IUWVN, 642-746 IUWMS iyo 642-736 IAUWS. Mid kasta oo ka mid ah imtixaannada waxaa ku jira 50 cinwaanada 60 oo ay tahay in la dhammeeyo saacad iyo badh. Imtixaan kasta, waxaa jira koorso tababar ah oo ah maalmaha 5. Koorsooyinkani waxay u diyaariyaan tartan si ay u sameeyaan shabakad siman, oo ay ku daraan waxyaabo kala duwan sida Voice over Wireless Network Local Area Networks, faa'idooyinka adeegga iyo hubinta shabakada khatarta khatarta ah.
Shahaadooyin xirfadeed kasta oo ay bixiso Cisco waxay joogtaa mudo ilaa saddex sano ah. Muddadan ka dib, shahaadada iyo shahaadada markhaatiga marnaba marnaba uma qalmin faa'iidooyinka xirfadeed. Waa inuu dalbado dib-u-celin si loo ilaaliyo. Wuxuu leeyahay afar doorasho oo la fiiriyo. Waa in uu ka gudbo imtixaan kasta oo xirfad ah kahor intaan shahaadada la joojin ama ay dhaafto mid ka mid ah imtixaannada hadda CCIE. Caddad saddexaad ayaa ah in la dhaafo midigta hadda la bixiyay Cisco Certified Design Expert (CCDE) ee ka kooban ama hoos u imtixaanka ah. Doorashada ugu dambeysa waa in ay ka gudubto kulamada guddiga iyo baahiyaha sahanka ee shahaadada Cisco Certified Architect (CCAr) taas oo dib u xaqiijineysa dhammaan shahaadooyinka heerka hoose.
CCNP Wireless waa shahaadad weyn oo qadarin ah taas oo u baahan in tartamayaashu ay qaataan imtixaanka in ay leeyihiin saldhig weyn oo ku yaal dhulka. Tani waxaa ka mid ah labadaba barashada farsamooyinka iyo waxqabadka shaqada iyadoo la eegayo xaqiiqda ah in mar hore la xaqiijiyay, waxay ku shaqeyn doonaan xaalad xidhiidh oo run ah. Tani waxay isku dayi doontaa in ay tijaabiso wax kasta oo awood-gacmeed ah oo ay ku haystaan ​​shahaadada.
Eeg Sidoo kale:Maxay shirkadu uga rabaan Xirfadayaasha Amniga iyo Admins CEH Certified?